Ciidamadda Xoogga dalka oo la wareegay Deegaanka Jameeca oo ka tirsan Gobolka Baay – Radio Muqdisho
Ciidamadda Xoogga dalka oo la wareegay Deegaanka Jameeca oo ka tirsan Gobolka Baay
Ciidamadda xoogga Dalka iyo kuwa AMISOM ayaa kala wareegay Kooxda Shabaab Deegaanka Jameeca, oo hoostaga degmada Buurhakaba halkaasi oo Kooxda ay dadka ku dhibaateyn jirtay.
Ciidamadda Huwanta oo kaashanaya kuwa AMISOM ayaa Deegaanka Jameeca oo u dhow Degmada Buurhakaba ee Gobolka Baay ka saaray Maleeshiyaadka Arxanka daran ee Shabaab oo halkaas ku dhibaatay jiray Dadka shacabka ah ee Deegaankaas ku dhaqan muddo.
Wariyaha Warbaahinta Qaranka uga soo warrama Gobolka Baay ayaa soo sheegaya in Ciidamadda Xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ay ku sugan yihiin Deegaankaas isla markaana dadka shacabka ah ay aad u soo dhaweeyeen iyaga oo ku faraxsan in kooxdaas dhibaatadooda laga Dulqaado.
Dhawaanahaan Ciidamadda xoogga oo ay hor gacayaan saraakiisha sare ee ciidamadaas waxa ay kooxda shabaab kala wareegeen degmooyin horay ay u maamuli jireen kooxda shabaab kuwaa soo ay ka mid yihiin Degmada Baardheere oo ka Tirsan Gobolka Gado, degmada Diinsoor ee Gobolka Baay iyo Degmada Ceelbuur oo ka tirsan Gobolka Galgaduud, iyadoo Dadkaas ku sugan degmooyinkaas ay sidiiran u soo dhaweeyeen Ciidamadda xoogga dalka oo waji Cusub u furay Shacabkaas.
Taliska Boliiska oo Sheegay inla dar-dar galin doono Awoodda Ciidanka Boliiska